ကိုယ်အလေးချိန်မတက်ဖို့ ဘာလုပ်မလဲ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
3. ဘူးဖေးတွေမှာ အလွန်အကျွံမစားပါနဲ့။
5. ကိုယ်အလေးချိန် ပုံမှန်ချိန်ကြည့်ပါ။
6. ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ သွားရည်စာတွေမစားပါနဲ့။
7. အရက်အများကြီး မသောက်ပါနဲ့။
၁၇.၃.၂၀၁၈ | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး